"के सार्वजनिक शौचालयहरूमा गोप्य, सुरक्षित र महिनावारी भएको बेलामा प्रयोगको लागी व्यवस्थित छन् ?" Nepalpatra "के सार्वजनिक शौचालयहरूमा गोप्य, सुरक्षित र महिनावारी भएको बेलामा प्रयोगको लागी व्यवस्थित छन् ?"
काठमाडौँ । नायिका केकी अधिकारीले के हाम्रो घर , विद्यालय, कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानहरुमा महिलाहरुका लागि उचित शौचालय छन् भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। नायिका अधिकारीले सामाजिक संजाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै यस्तो प्रश्न गरेकी छन् ।
नायिका अधिकारीले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, “युनिसेफको अनुसार “१९ प्रतिशत सरकारी विद्यालयहरूमा किशोर र किशोरीका लागि छुट्टा-छुट्टै शौचालय र महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन सुविधाको अभाव रहेको छ ।” मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनका लागि गोप्य, सुरक्षित तथा सुविधायुक्त शौचालय अति आवश्यक । के हाम्रो घर , विद्यालय, कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानहरुमा महिलाहरुला लागि उचित शौचालय छन् ? यदि भएमा पनि कति गोप्य , सुरक्षित र महिनावारी भएको बेलाको प्रयोग्ग लागी व्यवस्थित छन् ? के तपाईको वरपर भएका शौचालयहरू महिला-मैत्री छन् ? कृपया कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिनु होला !”
नायिका ऋचा शर्मा आमा बन्दै, भन्छिन्, “नयाँ जीवनको आगमन”
ईओजी (Errors of God) वेब सिरिजको पोस्टर गरियो सार्बजनिक
यस्तो छ नयाँ बर्ष २०७८ सालको गायिका अश्मिता अधिकारीको कोसेली
नायिका शिल्पा पोखरेलले प्रकाश सुवेदीलाई लगाइन यतिठुलो आरोप
नायिका शिल्पा पोखरेल र सोनु खत्री प्रेममा रहेको भन्दै प्रकाश सुवेदीले खुलासा गरेपछि…
आफूलाई भन्दा बढि तिमीलाई माया गर्छु : अन्जु पन्त